Gary Neville & Jamie Carragher Oo Magacaabay Meesha Uu Ben White Ku Xunyahay Kadib Guuldaradii Brentford. – Banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Gary Neville & Jamie Carragher Oo Magacaabay Meesha Uu Ben White Ku...
Gary Neville & Jamie Carragher Oo Magacaabay Meesha Uu Ben White Ku Xunyahay Kadib Guuldaradii Brentford. – Banaadirsom
Gary Neville & Jamie Carragher ayaa isku raacay in ay kooxaha kale Ben White ka bartilmaameedsan doonaan kubadaha madaxa ah kadib markii uu xiddigu soo bandhigay qaab ciyaareed xun kulankii ay Arsenal guuldarada kala kulantay Brentford.
White ayaa Arsenal ugu soo biiray 50 milyan suuqa xagaagan iyada oo wax weyn laa filayay laakiin xiddiga 23 jirka ah ayaa soo qaatay habeen uu doonayo in uu iloobo kulankiisii ugu horeeyay.
Xiddiga ugu qaalisan Arsenal suuqa xagaagan ayaa lagu amaanay qaabka uu ugu fiicanyahay ciyaarista kubada cagta laakiin waxa soo baxday ceeb kale oo uu leeyahay kadib guuldaradii Brentford.
White ayaa door ku lahaa goolkii 2-aad ee ay Brentford dhalisay kadib markii uu ku fashilmay in uu iska difaaco kubad madax ahayd oo laga dhaliyay Banaadirsom Arsenal sidoo kale ku dhibaatooday in uu kubadaha karooska ah ka difaacdo xiddiga Ivan Toney.
Gary Neville ayaa sheegay in qaab ciyaareedkii uu Ivan Toney ku soo bandhigay Ben White hadii ay noqoto kubadaha madaxa ah iyo waliba kubada xiddig iyo xiddig ah ay caawin doonto kooxaha kale.
“Arintan waxa ay dhiiri galin doontaa kooxaha kale ee ka hor tagaya Arsenal sababta oo ah waxa cadaatay ceebta uu Ben White leeyahay”.
“Waxa aan horay u sheegay in ayna cidna xasuusan doonin baasaskii uu Ben White sameeyay xilli ciyaareedkii hore”.
“Marka aan sheegayno in uu xiddigu ku fiicanyahay kubada waxa arintaas la isticmaali jairay 15 sano kadib marka uu daafacu ku fiicanyahay kubada”.
“Marka laga hadlo daafacyada 6-da kooxood ee ugu waaweyn, waxa ay ku fiicanyihiin baasaska sda Harry Maguire, John Stones, Virgil van Dijk iyo Thiago Silva”.
“Sidaas darteed waa in aan joojin o aan sheegno in uu kubada iyo baaska ku ficianyahay saabta oo ah dhamaan daafacyada premier League way ku fiicanyihiin laakiin muhiimada ayaa ah difaacashada goolka iyo in uu farqi u samayn karo”.
“Waa kulankii ugu horeeyay laakiin waa in aad si cad u ogaato xiddiga Ivan Toney waxa uu dhawr jeer dhaafay Ben White arintaasna waxa ay dhiiri galinaysaa kooxaha kale”.
Carragher ayaa dhankiisa sheegay in uu ka wel-welsanaa markii Ben White lala xidhiidhinaay liverpool waliba uu ka cabsi qabay in uu Liverpol u biiro.
“Waxa aan rajaynayaa in uu shaqo fiican qabto laakiin ka hor intii ayna Arsenal la saxiixan waxa aan ka cabsi qabay in uu ku biiro Liverpool sababta oo ah kuma fiicna kubadaha madaxa”ayuu sii raaciyay.
Previous articleMarkab laga leeyahay Turkey oo lagu weeraray meel ka baxsan xeebaha Muqdisho
Next articleQATAR oo Washington ka furtay dacwad ka dhan ah Eritrea – Maxay isku hayaan?